Dugsiga Dhexe Awood Sare | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u heellan yihiin inay buuxiyaan baahiyaha aqooneed ee gaarka ah ee arday kasta.
Tacliinta Sare waxay u fidisaa barnaamijyada iyo adeegyada soo socda ardayda dugsiga dhexe iyo macalimiinta.
Maamuus iyo Koorsooyin la dedejiyey
In kasta oo inta badan ardayda dhigata Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga iyo Minnetonka Middle School West ay helaan heerar ku habboon oo caqabad ku ah fasallada guud, haddana baahiyaha ardayda qaarkood ayaa si wanaagsan looga daboolaa goobaha kale.
Maamuusyo kala duwan iyo koorsooyin la dedejiyey ayaa lagu bixiyaa fasalka 6aad, 7aad iyo 8aad. Koorsooyinkan waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha ardayda ku shaqeynaya heer aan la taaban karin ama leh awood aad u sareysa mid ama in ka badan oo maaddooyinkan ah. Ardaydu waa inay sidoo kale muujiyaan dhiirigelinta iyo caadooyinka shaqada ee lagama maarmaanka u ah inay ku guuleystaan manhaj aad u adag.
Soo dejiso buugga tusmada koorsada Dugsiga Dhexe
Seminar Sare oo Sare waa koorso sanadle ah oo la kulmo hal mar usbuucii dhammaan saddexda sano ee dugsiga dhexe. Fasalka waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha aqooneed iyo bulsho / shucuur ee ardayda hibada leh. Heer kasta oo fasal ah ayaa ka qayb gala saddex qaybood oo mawduucyo kala duwan ah. Cutubyada waxaa loo qaabeeyey sida ku xusan Ururka Qaranka ee Heerarka Carruurta Hibada leh, waxayna la jaan qaadayaan himilada Degmada iyo himilooyinka loogu talagalay Ardayda Waxbarta ee Sare.
Si loo daboolo baahiyaha aqooneed, cutubyada waxaa loogu talagalay:
Soo bandhig mashaakil macno leh oo aan la taaban karin, furfuran, dhinacyo badan leh
Baadh fikradaha iyo mabaadi'da iyo xaqiiqooyinka iyo xirfadaha
Ubaahan boodbood garasho iyo wareejin
Dhexgal danaha ardayda iyo ka faa'iideysiga awoodaha sababaynta
Si loo daboolo baahiyaha bulshada / shucuurta, Seminar Sare oo Muhiim ah ayaa bixiya:
Fursad joogto ah oo lala shaqeeyo asxaabta caqliga
Taageero joogta ah oo ka socota aqoonyahan hibo u leh oo fahmaya bartaha hibada leh isla markaana ka caawin kara halganka ilmuhu la kulmi karo (tusaale, kaamilnimada, xoojinta, guul-darrada, walwalka, iwm)
Xaalad amaan ah oo fikradaha la wadaago
Macluumaad intaas ka badan, fadlan la xiriir Macallinka Awood Leh ee dugsiga dhexe ee ilmahaaga:
MME: Deborah Zachman at deborah.zachman@minnetonkaschools.org
MMW: Margaret McDonald at margaret.mcdonald@minnetonkaschools.org
Tirada Dadka Bartilmaameedka ah
Caqli ahaan hibo u leh. Ardayda hibada leh ee leh IQ ku dhowaad laba leexasho jaangooyooyin ka sarreeya heerka caadiga ah.
Ka qaybgal, tartan iyo isku xirka ardayda hibada leh. Bixinta kobcinta maadooyinka kala duwan si loo hubiyo horumarka fekerka nidaamka sare. Taageer baahida bulshada iyo shucuurta gaarka ah iyada oo loo marayo shaqo macno leh asxaabta caqliga leh.
Jiid-bax Kooxo yar yar ayaa isbuuciiba hal mar ka baxa hal muddo; waqtiga bixida ayaa meerto toddobaadle ah.
Xogta qiimeynta jaango'an; macallinka iyo tallada waalidka. Matrix miisaan leh ayaa isku daraya dhibco badan oo xog ah - CogAT, WISC-V, KBIT2, ama qiimeyn kale oo caqli gal ah (130 + ama 98% il); NWEA ama dhibcaha guusha MCA; Miisaanka qiimeynta waalidka iyo waalidka.
Agaasimaha Tacliinta Sare
Katalogga Koorsada Dugsiga Dhexe
Soo Koobidda Adeegyada Sare
Shirka Waalidka Meelaynta Ardayga
Dugsiyada dhexe ee Minnetonka waxay caadi ahaan bixiyaan waxqabadyo tacliimeed dhowr ah oo ay ka mid yihiin:
Horyaallada Xisaabta Qaaradaha
Ka hubi boggaga dugsiga dhexe liistada hadda jirta ee waxqabadyada kobcinta.
Waxbarashada Sare /